सरकारलाई शिव परियार आग्रह – “दलित” शब्द खारेज गरियोस ! – Everest Pati
सरकारलाई शिव परियार आग्रह – “दलित” शब्द खारेज गरियोस !
अन्तर जातीय विवाहको विषयलाई लिएर रुकुम पश्चिममा भएको घटनाले अहिले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । जाजकोटका २० बर्षिय युवा नवराज विश्वकर्माले उपल्लो जातिकी युवतीसँग प्रेम गरेका कारण गएको शनिवार आफ्नो ज्यान गुमाए। साथीहरु लिएर प्रेमिका लिन गएका नवराज र उनका दुई साथी फर्केर आएनन् ।
गाउँलेको कुटाइबाट नवराज र उनीसँगै दुई साथीले पनि ज्यान गुमाए । अझै ३ साथी बेपत्ता छन् । अहिले यस घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ । त्यस्तै बिभिन्न सेलिब्रेटीले पनि यसको बिरोध गर्दै आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
यसैक्रममा चर्चित गायक शिव परियारले पनि आफ्नो अभिव्यत्ति दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत दलित शब्द खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन् – जब सम्बोधन शब्द नै निच शब्द छ तब समानता कसरी सम्भव हुन्छ ?
जातिय उत्पिडनमा परेका बर्गहरुको सम्बोधनमा प्रयोग गरिने “दलित” शब्द खारेज गरियोस ! यो शब्दको उच्चारण र प्रयोगले पनि मान्छे मान्छे बिचमा बिभेद बढाउन मद्दत गरेको महशुस भएको छ ! दलित सम्बोधनको साटो समग्र जातिय उत्पिडनमा परेका नेपालीहरुको सम्बन्धमा सम्मानजनक शब्दको ब्यवस्था गरियोस !
उत्पिडनमा परेका बर्गहरुको शैक्षिक र सामाजिक अवस्था सुधारोन्मुख परिवर्तनका लागि नेपाल सरकारले उल्लेखनिय भुमिका खेलोस ! नेपाल सरकार र सम्पुर्ण उत्पिडित बर्गको समानताको लागि आवाज उठाउने निकाय, संस्था ,अभियान कर्ता र ब्यक्तिहरुमा म लगायत सबैको सादर अनुरोध !
जब सम्बोधन शब्द नै निच शब्द छ तब समानता कसरि सम्भव हुन्छ ? जातिय उत्पिडनमा परेका बर्गहरुको सम्बोधनमा प्रयोग गरिने…
Posted by Shiva Pariyar on Tuesday, May 26, 2020
भागेर बाँचेका नवराजका साथी भन्छन्- ‘भेरीमा हाम फल्दा पनि छाडेनन्, नदीमै आएर हँसिया र चिरपटले हाने’